laacib » Man United Oo U Diiday Shaqaalaha Duubaya Filimka Taxanaha Ah Ee Man City Inay Gudaha U Galaan Old Trafford Kulanka Manchester Derby
Manchester United ayaa diiday inay ogolaansho u siiso shaqaalaha duubaya filim cusub oo ku saabsan laacibkii deriskooda ah ee ay xafiiltamaan ee Manchester City inay Old Trafford gudaha u soo galaan kulanka Manchester Derby.
Shirkada Amazon Prime ayaa Manchester City ku siineysa 10 milyan ginni inay duubaan dhacdooyinka daaha gadaashiisa ah ee xilli ciyaareedkan 2017-18, waxaana ay rajeynayeen in ogolaansho loo siiyo inay laacibkii u raacaan qolka labiska ee Old Trafford kulanka Axada.
Haddii uu go’aanka United yahay mid ku saleysan sharciyo gooni ah oo u degsan laacibkii iyo haddii uu yahay mid ay kaga careysiinayaan laacibkii deriskooda ka hor kulanka Axada ayaa ah mid aan la ogeyn.
Filimkaan taxanaha ah oo la filayo in ugu yaraan uu qeyb ka ahaa laacibkii Pep Guardiola oo hal koob u dabaaldegeysa ayaa waxaa la laacibkii doonaa sannadka danbe.
Isagoo maanka ku haya kulanka Manchester Derby ee Axada, tababare Pep Guardiola ayaa isku shaandheyn weyn ku sameeyay shaxdiisa kulankii xalayto ee Champions League taasoo keentay inay guuldarro 2-1 ka soo gaartay laacibkii reer Ukraine ee Shakhtar Donestk.